Paridza Kristu, Varatidze Mbiri — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Kutaurira vanhu nezvaJesu sokuti chimwe chezvinhu izvo tose tinoziva kuti tinofanira kuita, asi tose tinzwe mhosva pamusoro kuita zvakakwana. Ndizvo here? Ndiri ndoga kuti? Kunyange chete vhiki rino zvekare, Ndakanga kuora nemhosva nokuti ukama ndakatanga kuvaka nomumwe vavakidzani vangu vorudzii vakatanga idonhe. Handina kumbovapo sezvo kwakaunzwa sezvandinofanira nezvokuvaka pamusoro ukama, uye kuramba kuedza kumuudza nezvaJesu. Uye zvinoita sokuti Ndinonzwa iyi nzira kazhinji. Mubvunzo ndinoda kubvunza Ndokusaka? Chii mwoyo maonero anofanira wakaiswa? Ndinoda pfungwa dzangu kuti kuvandudzwa. Ndine kuyeuka kuti nei ndiri.
Zvino hapana mubvunzo kuti pekuparidza ndiye sezvinotyisa uye zvakaoma uye kwaishungurudza. Uye ndizvo chaizvo zvinoitika mumwoyo yedu. Zvakadini sei vamwe vanonzwa nezvazvo? Achiedza kugombedzera mumwe kuti zvavari vatadzi vanoda Muponesi uye kuti Jesu ndiye chete nzira, sokunge yakaipisisa mhosva wezvose tsika dzedu 'bvumidza ". Hazvina tsamwisa.
Saka nei tichifanira kuparidza Evhangeri? Isu kuvhura miromo yedu uye hapana anoda kunzwa. Vanhu vanotivenga nokuti. Vanhu vanoti tiri shure nguva. Vanhu vanoti tiri vakabatirira ane yechinyakare bhuku pamwe chikare pfungwa yekare. Tiri kurarama munyika ine rima, nyika ine utsinye. Saka nei? Tiri kutambisa nguva yedu
We gotta kuziva nei tiri kuzviita, kana isu tichati mapfumo. Tiri Evhangeri saka tinogona kumanikidza munhu wose kufanana nesu? Imhaka yokuti tiri bigots vanofunga tiri nani pane wese? Imhaka yokuti isu tose tinoda tariro imwe mhando kuomerera uye Jesu achaita? Aihwa. Tinoparidza vhangeri nokuti tinoda vanhu kuti vaone kubwinya kwaMwari. Uye tinoona kuti kubwinya muMwanakomana wake.
Kana uchifamba umwe chinhu ngazviitwe kuti. Isu tinoparidza Kristu kuitira vanhu vanogona kuona kubwinya.
Muropa nezvinodhaka kuwana dzakakwirira nokuti havana kunzwisisa kubwinya kwaMwari. Rap chimhure zita rake vakazvirongedza sandara naJesu, nekuti havana kunzwisisa kubwinya kwaMwari. Young dudes munzvimbo dzedu kupfura mumwe, nekuti havana kunzwisisa kubwinya kwaMwari. Vakadzi Young vanovimba muukama nokuti havana kunzwisisa kubwinya kwaMwari. pauduku mwoyo vakazviuraya nokuti havana tariro, nekuti havana kunzwisisa kubwinya kwaMwari. Vanhu vanoenda kugehena nokuti havana kuona kubwinya kwaMwari muvhangeri uye vaivimba Kristu. Kuona kubwinya kwaMwari zvinhu, uye tinoda kuti kuzviona.
Patinowana nzwisa kubwinya kwaMwari munaKristu, isu kuzova zvakafanana. Saka ngationei kufunga zvinoreva kubatsira vanhu kuona kubwinya kwaMwari munyika ine rima, apo vanhu havambozivi kuda kumuziva.
MuApostora Pauro aiziva zvazvaiva zvakaita kushumira pakati vanhu vakanga vakamuvenga uye Gospel ake. Tinowanzotaura kufungidzira kuti Pauro akagara kumwe pamahombekombe netsoka dzake Uzivi sezvo iye anonyora tsamba iyi. Aihwa, Pauro anogara munyika chaiyo nezvinetso chaiye - nyika yaiva munzira dzakawanda zvizhinji akaoma kupfuura zvedu. Uye tsamba iyi yakanyorwa paakazvitaura.
Tsamba yaPauro yechipiri kuchechi yeKorinde munzira dzakawanda kudzivirira uye rondedzero ushumiri hwake mukutarisana nokushorwa. Dzokerai neni 2 Corinthians 4:1-6.
saka, zvatine kushumira uku kubudikidza netsitsi dzaMwari, hatiori mwoyo. 2 Asi takaramba nyadzisa, zvakavanzika nzira. Tinoramba kudzidzira manomano kana kuti tamper shoko raMwari, asi nokuda rakazaruka okuti chokwadi tingadai kuzvirumbidza hana wose pamberi paMwari. 3 “Zvino kana evhangeri yedu yakafukidzwa, rakafukidzwa kuna avo vari kuparara. 4 Kana kwavo mwari wenyika ino wavakapofumadza fungwa dzevasingatendi, kuti muvachengete kuona chiedza chevhangeri kukudzwa kwaKristu, anova mufananidzo waMwari. 5 Nokuti chii tinozivisa hazvisi isu, asi Jesu Kristu saIshe, pamwe isu savaranda venyu nokuda kwaJesu. 6 For Mwari, uyo akati, "Chiedza ngachipenye murima,"Akapenyera pamwoyo yedu kuti atipe chiedza cheruzivo rwokubwinya kwaMwari pachiso chaJesu Kristu. (2 Corinthians 4:1-6)
Kana uri mutendi muna Gospel, wabatwa vakadanwa kuva mushumiri Gospel. Saka ndinoda kutarisa muenzaniso waPauro uye ndinoda kukuratidza zvidzidzo zvina ushumiri munyika ine rima
ini. Regai Waiver Nokuda Kusiya Men (1-2)
Kuramba zvakaoma. Takaona zvose nazvo. Zviri muropa kuti vanhu kuti mwoyo, uye kukuvadza, kana vachiuya nezvipiriso munhu pachavo kana zvimwe uye munhu anotendeuka navo pasi. Kubva wechinomwe mamakisi vakomana kukumbira musikana kutamba, kuti kwete kuita kuti kuti kukoreji iwe kushandisirwa, kuti kwete kuwana basa kuti saka aida, kuramba zvakaoma.
MuApostora Pauro zvakaipa zvakawanda kurambwa uye kushorwa muushumiri hwake Vhangeri. Zvokuti vakawanda tsamba ake haana kumanikidzwa kudzivirira hunhu hwake uye nzira dzake uye mashoko ake. chinzvimbo chake haana undisputed.
Ungafungidzira ari Pauro nzvimbo? Iwe akaenda kuKorinde, dzechihedheni zvidhori nzvimbo ino, uye iwe vhangeri kwavari. Makavada. asi ikozvino, vamwe naysayers vakadyara mbeu mubvunzo mupfungwa dzavo. Mukukahadzika pamusoro penyu, uye zvinangwa zvenyu, uye nedzidziso yenyu. chinokurwadza.
Asi sei Pauro pavakakokwa? Tarisai ndima 1.
“saka, zvatine kushumira uku kubudikidza netsitsi dzaMwari, hatiori mwoyo.”
A. Usaora mwoyo
Pauro anoti haasi mwoyo. Ari vachiti asina mwoyo pasinei haana akasangana kushorwa kwakadaro. Haana rwawana mwoyo, vakakumikidza, uye vakakandirwa vari tauro kana akawana zvimwe kupa upenyu hwake kuti. Haana pamudyandigere uye akasarudza kuva n'anga pachinzvimbo. Ndeupi zvinoshamisa, muchifunga chii kurambwa uku akanga akaita. Tichifunga zvose Pauro akaenda kuburikidza. Kubva vari mujeri, namabwe, vakaramba. Pauro achiri haasi mwoyo; riri kuva chaizvo zvataizoda nomuedzo wokuita.
Wakambonzwa akaudzawo Vhangeri munhu uye waiva navo vanozviramba? ndine. Ndinogona kufunga nguva apo vanhu vakati havasi Mwari vanoda, kana nharo neni uye akandiudza Mwari haana zvechokwadi, kana vanhu vakatanga kuita shamisa uye kudzivisa neni mushure Ndakaudza navo, kunyange vanhu vakanga noutsinye achinditi uye akatyisidzira ini. Sei uchida kupindura kuti? Pamwe ungave uchida kurwa, asi handigoni kurwa. Vazhinji vedu vanoedzwa kuti mwoyo, uye mapfumo. Ndiani anoda kuti tirambe kumhanyira wall?
Saka pandinoverenga aPauro achiti haana kurasa mwoyo. Ndiri kushamiswa. Ndinoda kuziva kuti anozviita. Nei asina kurasikirwa mwoyo? Iye anotiudza muno mundima iyi.
Pauro haasi kurasa mwoyo nemhaka yokuwanda ushumiri kuti Mwari kwaakapa. Right ichi muchikamu pamberi 3, Pauro anopedza iboka nguva achitsanangura kubwinya ushumiri Wesungano Itsva. Kubwinya yokuva mumwe wevaya mhiri muchinjikwa, uyo kuwana kuparidza ruponeso nenyasha kuburikidza nokutenda muna Jesu.
Pauro kurudziro inobva ushumiri pachayo, kwete sei kubudirira aanoita chero vakapiwa nguva. Ari vanoonga Akasarudzwa naMwari ngoni kushanda nenzira iyi. Anonzwa ropafadzo. Saizvozvo, Iye anotaura kuti ushumiri itsva iyi sungano chinotova mbiri kupfuura ushumiri sungano yekare Mosesi. Zvino Pauro anoziva kuti iri tsitsi dzaMwari kuti vanhu vose vaizova ushumiri uhwu. Murume vaivenga kereke uye vakatambudza vaKristu.
Sezvo vanhu vaMwari, Mufaro wedu haibvi pane sei vanhu vachiteerera mashoko. chivimbo chedu muvhangeri haibvi pane sei vanhu vari munharaunda yedu vanoteerera. Zvinofanira inobva kubwinya kudanwa pachayo.
Zviri sezvisingadaviriki kuti vanhu muimba iyi tora mugove ushumiri zvikuru kupfuura ushumiri Mosesi pachake. Unonzwisisa kuti? Nekuti havaiti kuona kwavo havagutsikani, asi tinosimuka kuvaudza Uyo. Tinoziva chaizvo ndiani kuti ndiye. Tinowana kubatsira vanhu kuona kubwinya kwaMwari kufukidzwa! Tinowana kutungamirira vanhu muhuvepo hwaMwari.
vaKristu, hatifaniri kuora mwoyo. Handisi kureva kuti hatifaniri ashungurudzwa rima dzenyika yedu. Ndinoreva chete kuti hatifaniri akasuruvara uye kukanda vari tauro. Vanogona kuramba shoko, asi izvozvo hazviiti kuti kupfuurwa mbiri.
Regai waiver. Usaora mwoyo.
B. Kuramba unonyadzisa anofunga Nzira
“Asi takaramba nyadzisa, zvakavanzika nzira.”
Pauro anogona kunge mhosva yokuva tsvina uye nharo. hunhu hwake akanga apinda mubvunzo. Saka Pauro anodzivirira pachake, vachiti, "Aihwa, tava payakaramba kuti. uri isu haana kuvanda zvinhu uye kuva slimy munzira isu unoshanda. "Anoda kuti vazive kuti anoda kurarama nenzira yakafanira vhangeri.
Zvinoita chaizvo akaita zvaakataura 2 Corinthians 2:17, "Kusiyana dzakawanda, tisingadi peddled ware shoko raMwari unotiranga. Mukupesana, muna Kristu Tinotaura pamberi paMwari nokutendeka, sevarume akatumwa kubva kuna Mwari.”
Paul anonzwisisa kuti Evhangeri ushumiri zvinoda kuti isu tirarame imwe nzira. Uye kana tikadaro, hazvina anochinja ushumiri hwedu. Anonzwisisa kuti hatigoni kuzivisa Gospel, mundoudza vanhu kupfidza chivi, pasina kurarama upenyu chokupfidza pachedu.
tsvaka, kana uri achiparidzira Gospel vanhu, asi avo chete vanhu kuona hwako nyangarara, uri kushanda pamusoro Gospel. Vari kufunga Evhangeri uyu haafaniri kuva simba sezvo iye anoti zviri, chikonzero iye inowanzosvibisa kana iye nyangarara.
C. Musazvinyengera kana Tamper With Shoko raMwari
Pauro anozoti, "Tiri kuramba tsika manomano kana kuti tamper shoko raMwari." Kana sezvo NIV rinozvitsanangura, "Hatifaniri kushandisa unyengeri, uyewo isu kukanganisa shoko raMwari.”
Paul anoti, anoramba kuva manomano kana nezvokudya neShoko. Ari achiri pakudzivirira nzira unoshanda. achaita Paul NOT kuita chinhu tampers pamwe kana kuchinja kana mvura pasi Shoko raMwari. Zvimwe zvinoita sokuti pachena chinhu, asi zviri zvechokwadi kwete pachena.
Ini dai nhasi vaparidzi vaizova kutsunga ichi, kwete kuti tireve Shoko raMwari. Pane upenzi rakawandisa ikoko. Kana uri kufunga pamusoro chechi zvaunofanira kuva chikamu, nechokwadi vari kuparidza Shoko. Ivai nechokwadi havasi achiwedzera kana anotorera naro. vanhu vazhinji ndikavakira zita pachavo kuburikidza vachikanganisa neShoko raMwari. achiti Pauro haangaiti kuzviita.
Ndinoziva dzimwe nguva tose vanoedzwa kuzviita kunyange. Haufaniri kuva mufundisi kana TV muparidzi kuti tireve Shoko. Ndedzipi dzimwe ungangobvotomoka nzira kuti tamper neEvhangeri? Kuita sokuti zvikuru zvinakidze? Kwete kutaura pamusoro chivi? Kuvimbisa vanhu zvinhu Jesu haana kuvimbisa navo?
Zviri vorudzii sezvizvi. Wakamborwara pane mabiko kana chinhu uye paunogara pasi patafura uye atore sveta pakati to iced tea zviri unsweetened? Hamuzivi here ruvengo kuti? Nei unsweetened chando they kunyange kuvapo? Hapana anoda kuti. Saka chii Unoita, iwe tora kufanana 18 shuga omumasherufu uye edza kuti inonaka, nekuti unsweetened tea maturo.
In Saizvozvowo, vanhu vanoona Gospel sezvo unpalatable, kwete chinonhuhwira yakakwana vanhu kuravira panamafundo. Saka ivo wedzera kwachiri. Ivo akasabvumirana chero havasi zvachose kuchiparadza zviri wakanaka. Vanongoda kusanganisa zvimwe imomo naro, kuti vanhu vakaita izvozvo zvakawanda. Ndicho chinhu chinosemesa kuita! Uye anoratidza sei iwe zvechokwadi kuona Gospel.
Haufaniri kudiwa tamper pamwe chinhu kutoti munofunga kuti kukwenezverwa kana kukwana. Hazvibatsiri kuedza inowanzosvibisa kumativi neShoko raMwari ari kurwisa paari uye nzira unoponesa.
D. State The Truth pachena uye Regai It Stand Ndoga
“Asi nokuda rakazaruka okuti chokwadi tingadai kuzvirumbidza hana wose pamberi paMwari.”
The Gospel Zvakwana. Kutaura chokwadi pachena uye pachena. Hazvina kuita munhu chero zvakanaka kumunyengera muvira vanozviti kutenda. Kuwedzera chokwadi unobereka nezvifukidziro; hazvishandi kuvabvisa. Kana mukadzi ane chiso chakanaka, nei ririfukidze chifukidziro? Hazvina ndimuite ukwezve; izvozvo Anovanza runako yake yechokwadi. Havaedzi kuisa vanoumba pamusoro Gospel saka zvichava akanaka. Ngazviitike anongoremberera kuti kukudzwa kwaKristu wechokwadi zvaingoramba kuburikidza.
Kunyange mukati kurambwa, hatifaniri waiver. Hatifaniri kurarama nenzira anopesana shoko, uye hatifaniri kuchinja shoko kuedza kuita vanhu saicho. Tinofanira kuparidza Shoko raMwari pachena, nekuti tinoda kuti vaone kubwinya kwaMwari wechokwadi.
Asi hazvisi nyore saka. Saka kazhinji zvinoita sokuti havana havambovimbi kundoitora.
II. Chenjerera Basa raSatani
Tinofanira kungwarira sei inoshanda Satani. Pane zvakawanda kubvisa kusanzwisiswa nezvake. Vamwe vanhu vanoenda zvakanyanyisa kufunga kuti Satani ndiye ndezvaJosephus simba rose. Zvose zviri kuitika nemhaka simba rake guru, uye anogona kuita chero zvaanoda pose achida kuzviita. Kunewo vamwe vanoenda kune imwe zvakanyanya. Vanotenda nhema kuti Satani kana hakuwaniki kana kuti ndiye simba uye vakaneta. Vose vari vaviri okunyanyisa aya nhema uye vava ngozi kuti titende.
Chokwadi Satani ane simba, simba zvakakwana kuti dzinopesana Pauro uye ushumiri hwake. Teerera ndima nhatu mana.
“Zvino kana evhangeri yedu yakafukidzwa, rakafukidzwa kuna avo vari kuparara. Kana kwavo mwari wenyika ino wavakapofumadza fungwa dzevasingatendi, kuti muvachengete kuona chiedza chevhangeri kukudzwa kwaKristu, anova mufananidzo waMwari.”
A. Vamwe havaoni Vhangeri
Zvinoita sokuti mumwe kutsoropodza pamusoro Pauro kuti akanga ari anovanza mashoko ake achibva vamwe, kuti akanga achichengeta vamwe vanhu kuriona. Pauro akatii ndiko, kana mashoko haizikamwi vamwe, zviri kuvanzwa avo vanoparara. Zvinorevei izvo?
Pauro ari kutaura vanhu vasingagoni kuona chokwadi chemashoko shoko ndivo chete vanhu vari kuparara. Izvi zviri pachena mune 1 Corinthians 1:18 apo Pauro anoti, "Shoko romuchinjikwa upenzi kuna vari kuparara…" Inotarisira ibenzi kwavari. Pane vasiri vamwe vanhu kumwe pakunamata kuona, vanorarama nokutenda zvipikirwa zvaMwari, ndiani nhaka yeupenyu husingaperi, avo vanofunga Vhangeri ibenzi. vanhu ivavo havapo.
Acharanga vaya vasingazivi Mwari uye vasingateereri vhangeri raIshe wedu Jesu. havangaregi kurangwa nokuparadzwa kusingaperi uye akapfiga kubva pamberi paJehovha uye kubva noumambo kwesimba rake achiuya kuzorumbidzwa vake vatsvene vanhu uye kuti vakashamisika vose vanotenda pazuva. (2 VaTesaronika 1:8-10munhu)
Iyi haisi mutambo kuti isu vatambe. ushumiri Uyu upenyu kana rufu ushumiri. Avo vanoramba shoko iri Vhangeri, vanoramba Mwari. Uye vaya vanoramba naye vachapera uye kurangwa nokusingaperi.
B. Satani inopofumadza evasingatendi
Asi nei haagoni vanhu ava kuona? Ndiyo apo Satani anouya. Pauro rinomuti "Mwari wenyika ino." Saka zviri pachena kuti ane vamwe simba, asi kwete simba rose. Ari kunzi mwari wenyika ino kana zera ino, uye zera rino chete.
Zvino sezvo tinoziva Satani inotivenga. Rugwaro anoti prowls kupoteredza pasi ndichitsvaka munhu anogona riparadze. Ndiye mhandu yaMwari (kwete kuenzana), uye uyo akatitungamira kuti kutenda nhema pane chokwadi chaMwari. Saka chii Pauro anotii Satani anoita pano? Paul anoti vanhu ava vari kuparara, kana sezvo iye anovadana, nevasingatendi, havagoni kuona nokuti Satani inopofumadza navo.
Izvi zvinofanira kuva uchapupu sei zvinoshamisa uye zvinokosha kwatiri kuona kubwinya kwaMwari. Kuti mumwe zvinangwa chikuru chaSatani ndechokuita kuti kutitadzisa kuzviona. Satani anototi kuti tisaona nechokwadi tisingagoni kuona kubwinya kwaMwari muvhangeri.
Chii kubwinya kwaMwari? Kubwinya kwaMwari ndiko uremu hwake, runako rwake, kubwinya, ukuru, ukuru, uye nekupenya. Uyewo anezvakawanda chokuita Mukurumbira wake, vakakurumbira, uye kuvapo pakati pavanhu vake.
Vamwe vedu vanofunga chikuru chinangwa chaSatani ndechokuti kutipingirisha pamwe chepiramidhi kana ziso rimwe kwokufananidzira ari rapper kuti Album mumifananidzo. tsvaka, chinangwa chikuru chaSatani hachisi kumunyengedza imi apinde Illuminati aine Rap Album. chinangwa chikuru chaSatani ndechokuti kukudzivisa kuona kubwinya kwaMwari muna Kristu. Uye ndizvo tinoda vanhu kuona. Satani anoshanda kuzorwa nesu. Satani ndiye kwedu muvengi muvengi mhaka Kristu.
Satani haadi kuti vachishamiswa kubwinya kwaMwari. Anoda kuti tive vada pamwe mbiri ino. Anoda kuti hunonamatira mari, uye mukurumbira, uye ukama vakakwana, uye kubudirira. Satani anoda kuti kugutsikana kudaro pfupi, dzinozvirumbidza yepanyika, kuti hatina nguva kutarisa kuti Mwari akudzwe. Asi hazvina kukwana isu kuti kutsausa - chaizvoizvo kwatiri inopofumadza.
Wati wanga kubvumira Satani kuti imi mapofu uye chaizovatadzisa iwe kubva kutarira kubwinya kwaMwari? Uri kutevera runako ino panzvimbo kubwinya kwaMwari? kana zvakadaro, imi vari kutamba muruoko rwake uye kuita zvaanoda chaizvo kuti tiite. Ndicho chikonzero tiri sevatendi muna Jesu, nokuti tinoda vanhu kuti vaone kubwinya kwaMwari, kuti vaizova kuvimba Kristu, uye kurumbidza Mwari hwavo, kuparidza Evhangeri.
Vamwe vedu nei nyika yedu saka rima izvozvi. Sei vanhu vari vatadzi, ruvengo kune mumwe nomumwe, uye ruvengo kuna Mwari. Zvakanaka pano Ndiyo mhinduro. Havachina mapofu. Pamwe iwe tanga kuudzawo shamwari kana imwe nhengo yemhuri kwemakore pasina mberi uye uri waneta. Zvinoita sezvisingabviri. Hatifaniri vachigumburisana uye mapfumo pasi vanhu. Kana Mwari anogona kukuponesa, Iye anogona kuponesa munhu! Kana Mwari anogona achandiponesa, Iye anogona kuponesa munhu. Ivo mapofu, uye vanofanira kuona. Vabatsire kuona.
Izvi inotiratidza kuti kana vanhu vakaramba Gospel, hazvirevi shoko akaminama kupfuura kunoreva furashiraiti akaminama kana munhu bofu hazvirevi cherechedzai imi kupenya muna meso ake. Mapofu vanhu havaoni.
Musarega kurambwa kuti wakahadzika Shoko. Chokwadi chokuti mapofu havagoni kuona sei akanaka ari Mona Lisa ndiye, hazvirevi hazvina yakanaka. Hatidi pai mafungiro edu muri varume havagoni kuona.
C. Jesu ndiye mufananidzo waMwari
Pauro anoti Satani inopofumadza kubva pakuona "Chiedza chevhangeri kukudzwa kwaKristu, anova mufananidzo waMwari. " Ndokusaka kuparidza Kristu anoratidza vanhu kubwinya kwaMwari, nekuti Jesu Kristu ndiye mufananidzo chaiwo waMwari.
Jesu haana kunongova muprofita waMwari. Haasi chete murume akatumwa achibva kuna Mwari. Haasi chete Mwanakomana waMwari. Ndiye mufananidzo chaiwo waMwari. Izvi zvinorevei? Zvinoreva kuti Jesu, kuva Mwari pachake, ndiye mufananidzo Baba vakakwana. Kana uchida kuziva Mwari rudo akafanana, tarisai Jesu. Ngoni dzaMwari? Tarisai Jesu. Mwari anonzwa sei pamusoro vatadzi? Tarisai Jesu. Jesu ndiye Mwari ari panyama muchimiro, chifananidzo akakwana.
Mune muzvakasikwa tinoona mabasa aMwari, asi muna Kristu Jesu tine Mwari pachake, Emmanuel, "Mwari anesu." Kubwinya kwaMwari pachiso chaJesu Kristu chinonyanya kusarurama kuchavhumwa somuti pachena, nokuti imi vanoziva kuti kwete chete ndivo unhu hwaMwari ikoko, asi Mwari pachake ndiye ikoko. - Charles Spurgeon
Hakuna akamboona Mwari, asi Mwari mumwe chete, ari pachipfuva chaBaba, akaita kuti azivikanwe. (John 1:18)
Saka kana vanhu vanoona chiedza chevhangeri kukudzwa kwaKristu, Vanoona Mwari mukubwinya kwake. Satani haadi kuti aone kuti.
Tinoparidza Evhangeri zvokuti vanhu kuona kubwinya. Uye kuti kubwinya hunooneka Jesu.
Naizvozvo Satani akapofumadza vanhu, chii chatiri kuita? Satani ndiye "mwari wenyika ino." Chii chatiri kuita kana kuuya kuzorwa nesu?
III. Vanogamuchira basa Minister
Chimwe zvikonzero zvakawanda vedu kunetseka pekuparidza ndechekuti tikasanzwisisa nezvatatonzwa kudamwa kuti kuita.
“Nokuti chii tinozivisa hazvisi isu, asi Jesu Kristu saIshe, pamwe isu savaranda venyu nokuda kwaJesu.”
Pauro achiti, vanhu vanoramba mashoko angu nokuti havagoni kuona Kristu. Zvino Kristu ndiye zvatinoparidza. Havana ini kuramba, asi iye.
A. Paridza Kristu!
Somushumiri Vhangeri, imi mune mumwe chikuru basa. vaiparidza Kristu. Isu kuti Musanyura, uye kuvhiringidzwa, uye mwoyo, nekuti isu ibvai chinhu chikuru. Udza vanhu nezvaJesu.
Kana mapinda kuonana mumwe anenge arasika, pasina tariro, pasina Mwari uye iwe zvibvunze zvaunofanira kuita. Udza kuti munhu nezvaJesu. Ndizvo zvavanoda. Hongu vane zvimwe zvinodiwa. Asi dzinonyanya kudiwa Jesu.
Kana uchida zvechokwadi vanhu kuti vaone kubwinya kwaMwari, izvozvo akaaita hapana chakanaka kuparidzira zvimwe zvinhu. Zvino hazvirevi regai kubatsira vanhu kurarama upenyu hwavo zvakanaka, zvinongoreva zvinoreva Kristu anofanira kuva nechepakati kuti. Kana Jesu haasi nheyo, nokukurudzirwa, chinotsva shure zvose zvatinoparidza, zvatiri kuita hakupfuuriri.
Zvinorevei kuparidza Kristu? Tinoziva kubva vamwe rugwaro nokumwewo muMagwaro kuti Pauro aireva shoko Gospel. Pauro akati vaKorinde "Ndakatsunga kuziva chinhu pakati penyu, kunze Kristu, naiye wakarovererwa pamuchinjikwa." Pauro zvinoreva shoko pamusoro paJesu uye chii zvaAkaita uye sei Iye anoponesa.
Kana uri usiku huno pano uye hauzivi kuti shoko Gospel, zvino vanofanira kuva chinangwa chako usati wabva. Edza chii Vhangeri iri uye kana musinganditendi here. Panguva weshoko iri Gospel, ndicho chokwadi kuti Mwari mutsvene, chikuru chivi, Kristu akanga akakwana uye akafira vatadzi, uye Akamuka kubva muguva. Uye vanodzorera pachivi uye kuvimba Kristu achaponeswa. Ndicho shoko unofanira wakanzi kunoparidza.
Haugoni kuponesa vamwe. Haukwanisi kufira munhu. Haugoni kushandura munhu mwoyo. Unogona kuparidza chete Kristu. Havaedzi avaponese, Unovataurira iye anogona. Havaedzi kuchinja mwoyo, Unovataurira iye anogona. Havaedzi kuchenesa navo, Unovataurira iye anogona.
Nei Gospel? Nokuti uku ndiko kuti Mwari akasarudza vanhu, pavanonzwa Good News. Uye zviri pachena kubva mundima iyi, kuti kubwinya kwaMwari hunonyatsoonekwa vhangeri Mwanakomana Wake.
Just vhiki rino zvekare, Ndakanzwa zvipupuriro maviri kubva vatendi kuchechi yangu. vanhu vaviri ava vaiva nyaya dzakasiyana chaizvo. Mumwe aiva munyengeri zvinodhaka akanga akakiyiwa kumusoro. Mumwe aiva musikana akanaka, uyo aivenga Mwari. Vose vakanga Vhangeri akagoverana navo nguva zhinji. Uye havana kutenda. Uye munoziva zvinhu pakupedzisira kwakavaita kuvimba Kristu? Mumwewo akaudzawo Vhangeri navo. Hatimbozivi kana Mwari ari kuenda kubasa, kana sei Mwari kuenda kubasa. Tinofanira chete kuita basa redu. Udza vanhu nezvaJesu, saka vanogona kuona kubwinya kwaJesu.
Nokuti zvombo zvehondo yedu hazvisi zvenyama, asi vane simba raMwari nhare. Isu kuparadza nharo uye kwose kunozvikudza mafungiro vanomutswa kuzorwa nokuziva Mwari, uye utore ose pfungwa nhapwa kuteerera Kristu, tichange takagadzirira kuranga kusateerera ose, kana kuteerera kwenyu kuchinge kwazadziswa. (2 Corinthians 10:5-6)
Vamwe vedu vanoda kugovana zvipupuriro edu, chakanaka. Asi kana Vhangeri haamo hatisi kuzivisa Kristu, asi nokuzvidzora. "Ndaiva crackhead, ipapo ndakanga kwete. "That's nyaya zvakanaka, asi Ndingagona kuponeswa?!! Ungave zvinorevei kana kwete, kuti kuparidza pachako. Tiri kuita chinhu Pauro anoti havaite mundima ino. Ndapota itai kugoverana chapupu chenyu, asi uti kwavari evhangeri kuti wakakuponesa.
B. Kuva muranda Vaya Vanoda Chokwadi
Munzira dzipi Wanga achiudza Gospel manjemanje? Ndivanaani Wanga kuudzawo? Unofunga nezvazvo kana ugere vaigerwa cheya, kana kana ukaenda bvudzi rako aita? Ko munoti kuvavakidzani vako kana enyu navo pawakawana maminitsi mashoma kutaura nezvezvinhu?
Shoko iroro rinoshandurwa savaranda, rinoreva muranda. Ari achiti wandinokuparidzirai Kristu saIshe, uye ini somuranda wenyu, nokuda kwaJesu. Ndizvo zvinoshamisa. Uye hazvisi nguva chete Paul anoti chinhu chakadai.
Kunyange zvazvo ndakasununguka uye nhengo hakuna munhu, Ndiri muranda wose, kuti ndiwane vakawanda sezvaibvira. (1 Corinthians 9:19)
Uri kuita pachako muranda vaya vanoda kunzwa Good News?
Nokuti mumwe kuzonzwa Gospel kwandiri, sei kuva mamiriro ezvinhu akakwana? Ndinovimba kwete. Ndinoda kuva chiziva, uye kunyange zvingasanakira pachangu kuti vamwe vawane kusangana Kristu.
Vamwe vedu kubatikana. Tiri kushanda chaizvo, kana isu tinoshumira kuchechi zvizhinji, uye hatidi nokusingaperi kupedza nguva nevasiri vaKristu. Ndinonzwa sokuti kuti dzimwe nguva. Asi hatifaniri kusiya kuudza vanhu pamusoro Kristu kusvika mukana. Tinofanirawo kuvakira upenyu kumativi wokuparidza. Vanozvipira kuudza vamwe vanhu nezvaKristu.
Handizivi kuti ndiani mumupanda ichi Unoenda imwe nyika kuti tiudzewo Good News? Kune vanhu vasingazivi. Kune vanhu vari mapofu. ndivo mumadhorobha mamishinari achida kuenda kumwewo Where?
Tinoparidza Kristu, saka vanhu vanogona kuona Mwari. Asi chii pfungwa pakuparidza Kristu kana vanhu vari mapofu?
IV. Tariro In The Basa raMwari
Kana nyika kuitwa evhangeri pakupedzisira kunoenderana pedu, zviri chaizvoizvo hazviiti. Hatigoni usvinudze meso asingaoni. All chatingaita vanoparidza uye rudo kwavari. Ari Mwari kutikumbira kuita zvisingabviri? pamwe.
In Mabasa 26:18, Jesu anoti kuna Paul, "Ndiri kukutuma kwavari, usvinudze meso avo uye kuvatendeusa kubva murima, vaende kuchiedza, uye kubva pasimba raSatani kuna Mwari, kuti vagamuchire kanganwiro yezvivi uye vawane nzvimbo pakati paavo vakaitwa vatsvene nokutenda kwandiri. '
Sei kuti zvinobvira? Man haagoni kuita kuti. Teerera nendima 6.
“For Mwari, uyo akati, "Chiedza ngachipenye murima,"Akapenyera pamwoyo yedu kuti atipe chiedza cheruzivo rwokubwinya kwaMwari pachiso chaJesu Kristu.”
A. Mwari anosika uye Recreates
Pauro anotora wechipiri kutiyeuchidza Mwari ndiani. Anoda kutipa kukurumidza chiyeuchidzo njanji Rake chinyorwa. Uyu haasi Mwari uyo kuedza kuita chimwe chinhu chinoshamisa kekutanga. Uyu haasi Mwari uyo akaberekwa zuro kana kunyange miriyoni adarika. Uyu haasi Mwari uyo akasikwa. Uyu haasi Mwari ane maoko vari rakasungirwa anonzi mwari wenyika ino. The Mwari tava vamwe vanhu pachinzvimbo ndiye Mwari mumwe chete uyo akasika zvachose zvose zvachose.
Kana iye anogona kusika zvose zvakasikwa naye zvawo, Iye anogona kuunza bofu, varume vakafa kuupenyu.
Meso bofu kumirisana Mwari wedu. pfungwa vakaipa kumirisana Mwari wedu. mwoyo Dark ndivo kumirisana Mwari wedu. Akati, "Ngakuve nechiedza" kamwe uye anogona kutaura zvakare. Ndicho pfungwa Pauro ari kuita.
Kutaura kwokufananidzira anoshandisa akafanana ichi. Mwoyo yedu akafanana mukamuri guru, ndiko kudzika dema. Madziro vane gobvu. Hapana mahwindo. Hapana mwenje. No zviedza. No nemikova chiedza kuti dzinobuda pasi. Zvose muimba iyi akamboona ndiko rekunze. Evangelism ndiko kana munhu anomira kunze kuti mumba murima uye anozhambatata Kristu ndiIshe. Asi chiedza zvakadaro haauye. Vanoenda mhiri uye achizhamba, Akafira chivi uye wamuka! Kunyange zvakadaro hapana zviedza. Zvino imwe nguva imwe News iri chavanonzwanana, asi nguva ino aparadze bhora Mwari ngoni hwaparadza rose kuburikidza mumwe pamasvingo avo uye chiedza chakajeka iwe ndamboona ichipenyera kuburikidza. Kuti kamwe rima nzvimbo zvino senyanga sezvo chero nzvimbo narinhi aigona kuva. Zvinotora Mwari kuita kuti.
mukristu, kana iwe ndamboona kubwinya kwaMwari pachiso chaJesu, kana waita kutsauka rima nechiedza, hazvisi kuita kwenyu. Hakusi pakupedzisira kuita munhu vaiita nemi. Zviri kuita kwaMwari. Mwari chete ndiye anogona kuita kuti. Nepo mwari wenyika ino isu inopofumadza kubva kubwinya kwaJesu, wechokwadi uye mupenyu Mwari ichipenyera chiedza mumwoyo uye kunozarura meso amapofu. Uye Anoshandisa Shoko rake kuzviita.
Kana mwoyo wako hakuchisina zvasvibiswa sei kuti iratidzike hwako?
C. Akatarisa Jesu Kugara Nokuonga
Unonzwisisa zvaitwa naMwari kwauri? A yakawanda isu, kusanganisira pachangu, havana dzehasha zvakakwana pamusoro pekuparidza, nekuti hatizi zvikuru zvakakwana kuti isu tisvike kutarira Mwari akudzwe muvhangeri. Kana isu takanga zvikuru akabatwa, uye pandakanzwa naMwari wedu uye chii tine muna Kristu, tingadai kuudza vamwe vanhu vakawanda. We Unovataurira inoratidza tinofarira, uye wakanaka Albums, uye Conferences. Ko isu nezvaJesu? Kana tichida chinhu, hatigoni kubatsira asi kuchiudzawo vamwe.
mukristu, kushandisa zvakaitwa naMwari. Soka pachako muEvhangeri kuti, asi Mwari achiri kuratidza kubwinya kwake kure ikoko, patinosangana Kristu. Hazvina kugumira kana ukavimba naye. Musaedza kufamba zvekare Vhangeri! Zviri apo tiri kuona kubwinya kwaMwari zvakajeka zvikuru. Zviri chii tose Rugwaro anotaura nesu.
Sei Mwari dzaakawanza rudo rwake kwatiri. Mwari akadurura nefuma yenyasha dzake pamusoro pedu. Mwari akaratidza kushivirira nesu. Mwari ari kuratidza pachake kure. mapofu vane pamberi rakadzorerwa usafamba famba pamwe anovapofumadza. Une meso. Naizvozvo tarirai.
Paunenge wakaora mwoyo, rangarirai ndiani uri kushumira. Ramba Evhangeri. Isu tinoparidza Kristu kuitira vanhu vanogona kuona kubwinya.
Ushumiri munyika yerima akawira ichi kumbova, uye haazombofi nyore. Asi tinogona kudzidza kuna Pauro. Tinogona kudzidza, chekutanga, kwete waiver nokuda kurambwa varume. Chepiri, kungwarira basa raSatani. Chetatu, kugamuchira basa mufundisi. Chechina, kuti tariro mubasa raMwari.
Ndinoita sei kana handisi Evhangeri sezvandaigona kana sei ndinofanira kuva? Handidi kuti kumusiya mwoyo. Tarirai kuna Kristu. Ndinoda kuti kusiya kukurudzirwa pano, panguva ipi Mwari zvaaita kwauri muna Jesu. Uye chakaita kuti kuudza vamwe saka vanogona kuwana zvakafanana.
Pane zvakawanda zviri mungozi kuti tifambe famba kunzwa zvakaipa isu. Kunyanyisa pangozi.
Pane vaviri chete nzira kwatiri kana upenyu iri pamusoro. Vaya vasina kuisa kutenda kwedu muna Kristu, vachaparara. Kana isu haazozvidembi dzedu pamusoro chivi, chisiye, uye kukanda pachedu pamusoro tsitsi kwaJesu, Tichava kutsungirira kuparadzwa nokusingaperi.
Asi kana tava kutendeukira uye kuvimba Kristu, tinosimuka kuona kwatakaita kubwinya kwake zvino muEvhangeri Kristu. uye gare gare, pashure Achadzokera, tose achaidya miviri itsva. Uye isu achaona kukudzwa kwake zvakazara, zvachose. Izvozvo anokudzwa. Pane zvakawanda pangozi. Ramba kuparidza Evhangeri saka vanhu vanogona kuona kubwinya kwaMwari nokusingaperi.
Jared Duba • Nyamavhuvhu 22, 2013 pa 1:55 pm • pindura
Ini ndaiva Legacy akanzwa aunoparidza shoko iri. Ini chaizvo kukoshesa Evangelism uye akakurudzirwa kuti vanhu vakawanda kudaro vakanga pachena kwairi. Rakanga wo convicting uye vachingozvikurudzira kuti mweya wangu pachake. Ndatenda, BRO!
nyasha & runyararo,
Jay • Nyamavhuvhu 22, 2013 pa 8:35 pm • pindura
Rangarirai VaKristu pokugara ndakakuudzai vakomana pamusoro? Vanoda kubatsirwa.. Chero rubatsiro kwaizova vakomana huru. Mwari achapa asi kunyange Jesu aisagona kuita mabasa apo pakanga pasina kutenda. Munhu wose LA ari vasafuratire nemhaka yokushayiwa kwavo kutenda. Anorega kutsigira umambo uye kupa zvatinogona. Havaiti mumhanzi uye Mweya chaizvoizvo akataura mashoko avo. Anorega kupararira kuti zvakanaka! Tinoita izvi nokuti umambo y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Anorega kubatsira hama. Ndinokudai mese. uye Trip, ndapota ndibatsirei.. Kana uchida kuona zvibereko zvavo.. Check out YouTube.com/livin4christ4lyfe ..
PJMadsen • Nyamavhuvhu 23, 2013 pa 4:43 ndiri • pindura
Wow! Izvozvo zvakanaka here! Handikwanisi kumirira kugovana naro neshamwari dzangu! Ndatenda! I chaizvo kufanana kuti iwe unogona kunzwa uye kuona pamusoro YouTube…uye kuverenga mharidzo sezvo Trip Lee inoti pasi vhidhiyo! “Mwari anotikomborera vose.”
Taurai: Oh a preachin' ikozvino? @ TripLee116 anounza shoko zvavo ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • Nyamavhuvhu 23, 2013 pa 8:22 pm • pindura
mashoko Excellent. zvakanyorwa zvakanaka uye tsananguro iri nyore. Uripiko nokunyora magwaro bhatani? Handidi kuva kuti Mupumburu kuburikidza mapeji angu ose kuwana kwenyu romukova. :-) Ndingadai kuchipotsa.
SdoubleU • Nyamavhuvhu 24, 2013 pa 6:14 pm • pindura
Ndinotenda shoko iri. Yakanga chinhu I here vaifanira kunzwa. Website Izvi zvave kurudziro huru kwandiri. Mwari komborera!
Amarie • Nyamavhuvhu 25, 2013 pa 9:02 ndiri • pindura
I looooooooooooove unsweetened to iced tii! ;-)
DJ • Gunyana 11, 2013 pa 6:43 pm • pindura
ini, rwendo! Thanks dude! shoko renyu chaizvo ini kuzodzosera akafuridzirwa. Ndanga mwoyo saka manjemanje uye ichi chete vakabatsira.
dzinogarwa inopofumadza • Chikunguru 23, 2019 pa 7:07 ndiri • pindura
Angadai aida kuti wakacherechedza nayo chezuva.